WAO : Yaamicha Walgahii fi Qophee bashannanaa - OPride.com
Waldaan Artistoota Oromoo (WAOn) Adoolessa(July) 21 bara 2011 Jaarmayoota Hawaasa Oromoo adda addaa waliin wal ta’uun Dhimma Qabsoo Bilisummaa Oromoo irratti Waltajjii Maree Siyaasaa fi sagantaa bashannanaa guddaa qopheessaa jira.
Qopheen kunis mooraa Qabsoo Bilisummaa Oromoo keessatti nagaa fi araaraa buusuuf, akkasumas deemsi araaraa ABO tokkoomsuuf gaggeeffamaa ture sun dafee xumurarra akka ga’uuf qaama hundaa irrattuu dhiibbaa barbaachiusaa gochuuf kan
akeekkate yoo ta’u, sagantaan kun Caamsaa 21 kana guyyaa keessaa sa’a 1:00pm irraa jalqabee hanga lafa barii sa’a 2:00am ti gaggeeffama.
Sagantaa Maree siyaasaa kana irrattis bakka bu’oonni Maanguddoota Oromoo deemsa araaraa gaggeessaa turan, bakka bu’oonni Manguddoota Oromoo MN, Bakka buoonni, Waldaa Dargaggoota Oromoo, Bakka bu’oonni Waldaa Qorannaa Oromoo(OSA), bakka
bu’oonni hawaasa Oromoo North America fi hayyoonni Oromoo argamuun dhimmoota qabsoo bilisummaa Oromoo fi haala har’a keessa jirruu fi egeree keenya irratti yaada qaban akka nuuf dhiheessaniif afeeramanii jiru. Do’iin mata duree “Dhaamsa Abbaa” jedhuu fi hirmaannaa miseensota WAOn qopha’aa jirus Guyyaa kanatti agarsiisaaf ni dhihaata. Akkasumas Guyyuma kana gaalgala sa’a 8:00pm irraa jalqabee wellistoota Oromoo bebbeekamoo North Americaa, Awurophaa fi bakka adda addaa irraa dhufaniin gaalgalli aadaa bifa adda ta’een qopha’aa jira.
Kanaafuu Caamsaa(May) 21 bara 2011 guyyaa keessaa sa’a 1:00pm irraa jalqabee hanga Ganama barii sa’a 2:00am ti sagantaa keessan akka nu waliin taasifattaniif ammumaan kabajaan isin afeerra. Bakka qopheen kun itti ta’us dhiheenyatti isin beeksifna.